OS ကို-STORE | OS ကို-STORE ဘလော့ခ် - အပိုင်း 2
Do not simply assume that because television hasaUSB port, ကကလောင်ယာဉ်မောင်းကနေဖိုင်တွေကစားနိုင်ပါတယ်. အချို့ကိစ္စများတွင်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုတည်းကိုသာရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲကို run ဖို့လိုအပျသူအင်ဂျင်နီယာများအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ဥပမာ, to... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Use the troubleshooting instructions below if you install CD, DVD ဒါမှမဟုတ် Blu-ray player drive ကိုမဆို discs တွေကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့မဆို discs တွေကိုဖတ်ရှုဖို့တတ်နိုင်သို့မဟုတ်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါ. The instructions will help you resolve the problem in some... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
သင်တစ်ဦးကို CD သို့မဟုတ် DVD ကိုသင့်ကွန်ပျူတာ၏ optical drive ကိုမှာညပ်မိရနှင့်ထုတ်ရန်မည်မဟုတ်ပါလျှင်အဘယ်သို့ပြုရပါဖို့? You can take several steps to troubleshoot stuck DVDs or CDs Computers are what they are, ရှုပ်ထွေးသော. အဓိပ်ပာယျ,astuck... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ဒါဟာသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုမှကြွလာပေမယ့်လူအတော်များများနေဆဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာကနေ software ကို load လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဖို့လိုပေမည်သည့်အခါ optical drives တွေကိုလျော့နည်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်လာကြပြီ, သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာမြင့်မားသောအဓိပ်ပါယျ Blu-ray player ရုပ်ရှင် play, listen... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ယူအက်စ်ဘီ 3.0 Windows ကိုသည် device ကိုတပ်ဆင်ခြင်း Method ကို7/ 8 / 10 ယူအက်စ်ဘီ 3.0 လည်းနိမ့်တဲ့ operating အမြန်နှုန်းကိုထောက်ပံ့: အရှိန်အလွန်မြန်သော, အပြည့်အဝမြန်နှုန်း, အနိမ့်မြန်နှုန်း. တိုးမြှင့် bandwidth ကိုနှင့်အတူ, ယူအက်စ်ဘီ 3.0 အိမ်ရှင်နဲ့ controller နှင့်စက်ကိရိယာများနှင့်အတူလာ ... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
သင်တစ်ဦး 4K Ultra HD TV ကိုဝယ်ယူင့်ဆိုပါက, သငျသညျအစကအပေါ်စောင့်ကြည့်ဖို့အချို့သော 4K content ကိုလိုခငျြ. ပိုများသောအကြောင်းအရာများကိုကမ်းလှမ်းနေပါသည်, Netflix နဲ့တူသောက်ဘ်ဆိုက်များကနေတချို့ streaming များအပါအဝင်, VUDU, နှင့် Amazon. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, more and... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
အဘယ်ကြောင့် Blu-ray, DVD disc ကိုဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မကစားနိုင်ပါတယ်?
နိုဝင်ဘာလ 21, 2017 admin ရဲ့ 0
အဆိုပါနည်းပညာကိုဤနေ့အတွက်ပြီးပြည့်စုံ, ဖြစ်ကောင်းအချို့ bug တွေမတော်တဆအဲဒီမှာတည်ရှိနေကြသည်. တကယ်တော့, တစ်ဦးကအလွန်သေးငယ်တဲ့ကိစ္စနှင့်ဖြေရှင်းရန်လွယ်ကူသည်. အဆိုပါပြဿနာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာ့ဒ်ဝဲချွတ်ယွင်းပါဝင်သည်, ဒေသ, compatibility, disc ... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Samsung က စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် OS ကို-STORE processor ​​ကို Technology_Internet ပရိုဆက်ဆာ စီပီယူ ဥပဒေရေးရာအနက် နည်းပညာ မိုဘိုင်းဖုန်း Intel က Software များ 64-နည်းနည်းက Windows စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု HD Graphics HTC က device ကိုမော်ဒယ် Nokia က
Sony Ericsson က Technology_Internet processor ​​ကို Software များ ပရိုဆက်ဆာ စီပီယူ မိုဘိုင်းဖုန်း Intel က HTC က device ကိုမော်ဒယ် HD Graphics စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ဥပဒေရေးရာအနက် Intel က Server ကို 64-နည်းနည်းက Windows စမတ်ဖုန်းများ Samsung က OS ကို-STORE ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Samsung ရဲ့ Galaxy စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Nokia က Qualcomm မှ နည်းပညာ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက်